Abenzi be-Smart Pet feeder - I-China Smart Pet feeder Factory, abahlinzeki
I-Tuya Smart Pet feeder - I-WiFi Version SPF2000-W-TY
Izici eziyinhloko: -Isilawuli kude se -Wi-Fi - I-Tuya APP smartphone ehlelwe.-Ukudla okuzenzakalelayo nokwenziwa ngesandla okwakhelwe ekubonisweni nasezinkinobho zokulawulwa mathupha nokuhlela. -Ukudla okunembile ...
Isilawuli kude seTuya Smart Pet feeder Wi-Fi ngeKhamera - SPF2000-V-TY
Izici eziyinhloko: -Ukulawula okukude kwe-Wi-Fi -Tuya APP smartphone ehlelwe.- Ukudla okuzenzakalelayo nokwenziwa ngesandla okwakhelwe ekubonisweni nasezinkinobho zokulawulwa kwangaphambilini nezinhlelo. - Ukudla okunembile -Kuhleliwe ...
Okuzenzakalelayo Isiphakeli Sezilwane SPF2000-S
Izici eziyinhloko: -Ukuphakelwa okuzenzakalelayo nokwenziwa ngesandla - okwakhelwe ekubonisweni nasezinkinobho zokulawulwa mathupha nokuhlelwa kohlelo. - Ukudla okunembile - Hlela kufikela kokuphakelayo okungu-8 ngosuku. - Ukurekhoda kwezwi & ...
I-Smart Water Fountain SPD-2100
▶ Izici Eziyinhloko: • Amandla we-2L - Hlangana nezidingo zamanzi ezifuywayo • Izindlela ezimbili - ISMART / NORMALSMART: ukusebenza ngezikhathi ezithile, gcina amanzi egeleza, wehlisa umsindo nokusetshenziswa kwamandla ...
I-Tuya Smart Pet feeder 1010-TY
Isilawuli kude se-Smart pet feeder se-Wi-Fi ngeKhamera SPF2000-V
Izici eziyinhloko: -Ukulawula okukude - i-smartphone ehlelwayo.-HD ikhamera-real time interaction. Imisebenzi -Alert - thola isaziso efonini yakho ephathekayo.-Health management - Qopha ezifuywayo nsuku zonke ...